China Wooden izinto zokwakha ifektri abakhiqizi | SJJ
Izinto Zokwazisa ZokhuniIzinto ezibonakalayo zekhwalithi ye-premium, enobungani be-ECO. Kutholakala ngezindlela ezahlukahlukene, usayizi noma ukwakheka. Ilungele ukuhlobisa ikhaya, isikhumbuzo, izipho zokukhangisa nezenyuso. Iphunga lemvelo nomuzwa omuhle. Ilungele ukuqoqwa. Indlela enhle yokubopha ukufakwa kwezinkampani endaweni ...
Izinto zekhwalithi ye-premium yekhwalithi, enobungani be-ECO. Kutholakala ngezindlela ezahlukahlukene, usayizi noma ukwakheka. Ilungele ukuhlobisa ikhaya, isikhumbuzo, izipho zokukhangisa nezenyuso. Iphunga lemvelo nomuzwa omuhle. Ilungele ukuqoqwa. Indlela enhle yokubopha izinjongo zokufinyeleleka ezinkampanini isu lakho lesipho.
Izinto: Izinkuni ze-Beech / basswood / MDF
Inqubo ye-logo: Iphepha le-Offset lokuphrinta / iphepha eline-offset ukuphrinta / ukuphrinta kwe-silkscreen / i-laser umbhalo.
Langaphambilini Imihlobiso ye-Acrylic, Amathegi Nabanye